Warar dheeraad ah qaraxyo saakay kadhacay Bosaso – Radio Daljir
Warar dheeraad ah qaraxyo saakay kadhacay Bosaso
Febraayo 7, 2018 8:13 b 0
Laba qarax ayaa saakay kadhacay magaalada Bosaso ee xarunta gobolka Bari, kuwaasi oo gaystay khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira.
Qaraxa hore ayaa waxaa uu miino dhulka lagu aasay sida ay dad goob joogayaal ay ku warameen, waxaana uu ka dhacay bariga magaalada Bosaso gaar ahaana meel u dhow xaruntii hore ee shirkaddii Netco, waxaana ku burburay laba gaari oo shacab saarnaa, waxaana uu dhacay xilli ay goobta marayeen ciidamo katirsan kuwa amaanka.
Qaraxa labaad ayaa dhacay kadib markii goobta qaraxii hore kadhacay ay soo gaareen ciidamo katirsan kuwa ammaanka, waxaana ku geeriyooday askari katirsan ciidamada, laba kallena dhaawac ayaa kasoo gaaray.
Qaraxyadan ayaa kusoo beemaya xilli xalay weerar lagu qaaday saldhiga bartamaha ee Bosaso, kaasi oo sababay dhaawac sadex askari oo uu ku jiro taliye kuxigeenkii saldhiga bartamaha.
Ururka Al-shabaab ayaa sheegtay masuuliyadda weeraradan.